आज साउन २४ गत्ते आइतबार आफ्नो राशिफल हेरेर आजको काम सुरुवात गर्नुहोस् दिनचार्य राम्रो हुनेछ!:: Mero Desh
आज साउन २४ गत्ते आइतबार आफ्नो राशिफल हेरेर आजको काम सुरुवात गर्नुहोस् दिनचार्य राम्रो हुनेछ!
Published on: २४ श्रावण २०७८, आईतवार ००:५९
वि.सं.२०७८ साल साउन २४ गते । आईतबार । ईश्वी सन् २०२१ अगष्ट ०८ तारिख । नेपा ल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । दक्षिणायन । वर्षा ऋतु । श्रीशाके १९४२ । श्रावण कृष्णपक्ष । तिथि– औशी, बेलुकी ०६ बजेर ३८ मिनेट उप्रान्त प्रतिपदा । नक्षत्र– तिष्य , बिहान ०९ बजेर ४६ मिनेट उप्रान्त अश्लेषा ।
योग– व्यातिपात , रातको ०१ बजेर १३ मिनेट उप्रान्त वरियान । करण – चतुष्पद, बिहान ०६ बजेर ३८ मिनेट उप्रान्त नाग, बेलुकी ०६ बजेर ४८ मिनेट उप्रान्त किंस्तुध्न आनन्दादिमा – श्रीवत्स योग । चन्द्रराशि– कर्कट । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर ३१ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ४६ मिनेट । दिनमान ३३ घडी ०८ पला ।
मेष : (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) बिद्या तथा प्रतिस्पर्धा मा सफलता पाउन बढी नै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । आमा तथा आमासरहका मानिससँग मनमुटाब बढ्नेछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले पिरोल्नेछ । राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको खासै समर्थन प्राप्त हुनेछैन । व्यावसायमा नाँफा कमाउन निकै नै संघर्ष गर्नुपर्नेछ । सवारी साधन तथा घर जग्गाको कारोबारबाट केहि मात्रमा ला भ लिन सकिनेछ । तरपन कृषि तथा पशुपालन व्याव साय फस्टाएर जानेछ ।
बृष : (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) छोटो दुरिको व्यावसायि क यात्राको तय हुनेछ भ ने यात्राबा ट भनेजस्तो उपलव्धी हासिल हुनेछ ।मुद्दा मामिला तथा अदालतबाट हुने फैसला तपार्ईँकै पक्षमा आउनेछन् भने प्रतिस्पर्धी हरुलार्ई परास्त गर्दै अगाडी बढ्न सकिनेछ । बिद्यार्थी वर्गहरुले पढाइमा मिहिनेत गरी राम्रो नतिजा ल्याउन सक्नेछन् । पारिवारिक माहोलमा दिन बित्ने तथा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । भाग्यले साथ दिने हुँदा कामहरु समयमा बन्नेछन् ।
मिथुन : (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । माया प्रेममा मनमुटाब बढ्ने योग रहेकोछ । तरपनि बोलिको प्रभाव बढ्ने हुनाले महत्वपूर्ण निर्णयहरु आजको दिन गर्नु उपयु क्त हुनेछ । पति पत्नी तथा माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ । गीत संगितमा मन जानेछ भने कलाकारीता क्षेत्रमा समय लगानी गर्नेहरुका लागी समय उत्तम रहेकोछ ।
कर्कट:(ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) बिभिन्न विलाशी वस्तु को प्रयोग गरी मनग्गे आम्दानी हुनेछ । आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने चालिएका कदमहरुबाट भनेजस्तो नतिजा आउ ने हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ । माया प्रेममा एक अर्कालाई विश्वास गर्ने वाताबरण बन्नेछ । पढाइ लेखाइमा मनजाने हुनाले नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन पाइने हुँदा नाम कमाउन तथा पद प्राप्तीको योग रहेकोछ ।
सिंह : (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे ) कर्म प्राप्तिको लागि लामो दुरिको विदेश यात्रा हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदै न । समयको सहि सदुपयोग गरी विदेशि लगानीहरु ल्याई रोजगारका अवसरहरु बढाउ न सकिनेछ । व्यावसायबाट भनेजस्तो आम्दानी नहुने हुदा थप काम गर्न जागर हराएर जानेछ । घरमा आफन्त विचनै मनमुटाव बढ्ने योग रहेको छ भने माया प्रेममा धोका हुन सक्छ सचेत रहनुहोला ।
कन्या : (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) भौतिक सम्पत्ती तथा सवारी साधन जोड्न सकिनेछ । माया प्रेममा आत्मियता बढ्नेछ भने पति पत्नी बी च मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ । पैत्रिक धन तथा सरका री सम्पत्ती प्रयोग गरी आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई किनारा लगाउदै नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । साथिभाई तथा नातागोताबाट सहयोग पाइने हुनाले हरेक क्षेत्रमा अगाडी बढ्न सकिनेछ ।
तुला : (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) बुवा बुवा सरहका मानिस बाट तपार्ईँको काममा सहयोग हुनाले अन्य काम गर्न सहज हुनेछ । सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा तपार्ईँको बर्चस्व कायम रहनेछ भने माया प्रेममा एक अर्कालाई बिश्वास गर्दै अगाडी बढ्न सकिनेछ । नयाँ काम पाउने तथा नोकरिमा बढोत्तरी हुने योग रहेकोछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने उद्योगमा लगानी गरी रोजगारिका अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिनेछ ।
बृश्चिक :(तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) सवारी साधन तथा या त्रा गर्दा विषेश ध्यान दिनुहोला दु’र्घट’ना तथा अ’प्रिय घ’ट’ना घट्न सक्छ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउन निकैनै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सम्वन्धी समस्या ले सताउनेछ भने आफन्त तथा विस्वास गरेकै हरुबाट धोका हुनेछ । परिवार तथा आफन्त जनसँग मनमुटाव बढ्नेछ । पति पत्नी तथा माया प्रेममा अविस्वास सिर्जना हुनेछ ।
धनु : (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) श्वासप्रश्वास तथा छाती सम्वन्धी समस्याले सताउने हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो महशुस हुनेछ । दिदी बहिनीसँग मनमुटाव बढ्ने योग रहेकोछ । सवारी साधन तथा भौतिक सम्पतिको प्रयोग तथा परिचालन गर्दा ध्यान दिनुहोला,दिन मध्ययम रहेकोछ व्यापार व्यावसायमा नाँफा कमाउन बढि नै संघर्ष गर्नुपर्नेछ कामका सवालमा उठ्ने गोप्य कुराहरु बाहीर आउन सक्ने हुनाले सजक रहनु पर्नेछ । बैक तथा बित्तिय क्षेत्रमा गरीए को लगानीबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ ।
मकर : (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) माया प्रेम मा नजिक हुने समय रहेकोछ भने जीवन साथि को सहयोग पाइने छ।अध्ययनमा बिद्यार्थी हरुले चाहेजस्तो नतिजा हात पार्न सक्नेछन् । विलाशि वस्तुको प्रयोग मार्फत अरुको मन तान्न सकिनेछ । प्रिजजन भेट हुनेछ भने आथित्यपूर्ण सम्मान पाइने योग रहेकोछ । छोटो दुरिको व्यावसायिक यात्रा हुनेछ भने व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने योग रहेकोछ ।
कुम्भ : (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) स्वास्थ्य सम्वन्धी पुराना समस्याहरु ठिक हुँदै जाने तथा काम गर्न सहज वातावरण बन्नेछ । पढाइ लेखाइमा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई किना रा लगाउदै अगाडी बढ्ने समय रहेकोछ । पुराना ऋणहरु सकाउदै नयाँ कामको थालनी गर्न सकिनेछ । नोकरिमा प्रवेशको सम्भावनाला ई नकार्न सकिने अवस्था छैन । प्रेम प्रशङगमा एक अर्का बीच नजिक हुने तथा रमाउन सकिनेछ । सत्रु तथा प्रतिस्पर्धीहरु आईलाग्ने भए पनि अन्तत तपार्ईँको क्षमता देखेर आफै साईड लाग्नेछन् ।
मीन : (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) सामाजिक काम गर्ने अवसर आएपनि जस नपाउदा मन खिन्न हुनेछ । आफन्त तथा सन्तान पक्षले अनाबश्यक झन्झट दिनेछन् भने माया प्रेममा आफ्नो मायालुलाई बिश्वासमा लिन बढिनै समय खर्चिनु पर्नेछ । व्यापारमा सोचोजस्तो प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्छ । स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आई दैनिक कामहरु प्रभावित हुनेछन् ध्यान दनुहोला । पढाइ लेखाइमा प्रशस्त समय दिएपनि न्यून उपलव्धिमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था रहनेछ ।